Ceel Buur - Wikipedia
ceelbuur waa magaalo ey u xiisaan dadka bartay ku noolaashadeeda jawiga fiican aawgii
(Waxaa laga soo toosiyay Ceelbuur)
Ceelbuur (Af-Ingiriis: El Bur) waa magaalo qadiimi ah ee ku taal gobalada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud. Waa magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu taarikh dheer ee dalka wexeyna ahaan jirtey xarunta gobollada dhexe laga xukumi jirtey xiliga gumeysiga.
Magaalada Ceelbuur wa magaalo taarikh dheer ku leh dalka Soomaaliya wexeyna leedahay astaamo soo jiray ilaa qarnigii 16-aad xiligii gumeysiga.
Ceelbuur waxay caan ku tahay Sameynta burjikada iyo agabyada laga sameeyo dhooqada jilicsan ee laga qodo dhulka hoostiisa oo ay ceelbuur ku tahay Hodan
Ceelbuur waa magaalo kulansatay Qurux iyo hanaan wanaagsan marki aad eegto biyaha dur duraya ee dhex ceegaaga bartankeeda iyo jawiga u goonida ah oo ay leedahay
sidoo kale degmada Ceelbuur waxaa Ku yaalo Xarunta ciidanka guutada 22 aad ee malatariga xooga dalka somaliyed oo lagu magacaabo xarada Caana Moog .
dhanka fidinta diinta ceelbuur waxeey leedahay taariikh aad u dheer waxaana Horumuud u ahaa oo daganaay ama ka soo jeeday Sheikh Maxamed Faarax Culusow oo culumada somaliyed intooda badan ee yahiin faraci quraanka iyo kutaabta kale ee cilmiga soo baray ee Ceelbuur gobolada fog fog iyo kuwa dhawba uga imaan jiray in eey diinta ka bar taan Shiikha, sidoo kale waxaa degmada culimadeeda kamid ah Macallin Cabdi Guure, Macallin Ahmed Geesey, Ahmed Cabdi Geedi (Macallin Jacayl), Macallin Cumar Xeyle Fiidow, Macallin Ahmed Sheikh Mohamud Ciise iyo macallin cabdullaahi maxamuud cawaale (geedgale).
Oday dhaqameed ka degmada Ceelbuur kuwa ugu caansan waxaa kamid ah: Ugaas Faracadde, Yuusuf Dibad jeexoow (DC), Faarax Boorre, Xaaji Xasan Mahadalle Gardheer, Xaaji Barre Xeyle, Maxamed Sheikh Nor Sheikh Maxamed yare, Abdikarin Axmed Gindhish, Ahmed Qeylshe Casir (Garooc), Warsame Dolle (Warsame Hole), Maxamed Afrax, Oday dhaqameedyadaasi dhamaantood waa Murusade intii dhimatay allah u naxariisto inta noolna cimriga allah u barakeeyo.
Raggii gudoomiyaha kasoo noqday degmada Ceelbuur dowladii kacaanka waxaa ugu caansanaa: Korneyl Yusuf Dibid Jeexow (DC), Cumar Sheikh Maxamud Sheikh Maxamed Yare (DC).
Degmada qadiimiga ah e Ceelbuur waxaa Dagan oo xadaarad iyo ilbaxnimo fog oo 800 sano ka badan ku leh Beelwaynta Murusade .
XAAFADAHA DEGMADA CEELBUUR IYO SIDA LOO KALA DAGAN YAHAY.
■ Buur-bishaaro waa xaafadii Sheikh mohamed faarax daganaa waxaana ku yaalla xaruntii Sheikhu dadka cilmiga ku bari jiray oo mageceedu ahaa (Aboota Bareey), Goobaha qadiimiga ah ee xafadaaa ku yaalla waxaa kamid ah: Dugsi Sare, Ceel Yusuf Xeyle, Kaawada(Goobta burjikada lagu sameeyo) e.t.c. Xaafadasi waxaa dagan murusade.
■ Ceelriig waa xafad ay ku yaallaan labada ceel ee magalada biyaha siiya, School ka weyn ee Al-Nuur, Guriga gudoomiyaha iyo Minjirka oo xilliyada barwaaqada ah loo dabaal tago. Murusade ayaana dagan xaafadaa.
■ Seyberiya waa Xaafad uu ku yaallo Hospital ka weyn ee dagmada sidoo kale waxaa ku yaalla Guriga martida, Station ka, iyo Dugsi sare. Murusade ayaa dagan xaafadaa.
■ Wadajir waa xaafadii ugu horeysay ee laga billabay degmada, Meelaha ugu caansan waxaa kamid ah: Sarta dhagaxa, Sarta daawad, Ceelka Burrayaal, Ceel Afweyne e.t.c. Xaafadaas waxaa dagan Murusade.
■ Waabari waa laba dhinac - Dhanka koofureed waxaa dagan Murusade meelaha ugu caansan waxaa kamid ah: dugsi Hoose, Hotel Shillal, Hospital Marlin, Shiirkole, Baqdaad iyo meelo kale oo badan.
-Dhanka woqooyina waxaa dagan Duduble meelaha ugu Caansana waxaa kamid ah: College ka , Xarunta shirkadda Hormuud iyo Buurta Cali sareey.
Waxba lagama badali karo
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceel_Buur&oldid=219760"
Last edited on 15 Oktoobar 2021, at 15:22
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2021, marka ee eheed 15:22.